Akhriso Ku Dhowaad 40 Xubnood Oo Dhimasho Iyo Dhaawac Ku Noqotay Camaliyaddii Muqdisho. – Bogga Calamada.com
Faahfaahinno dheeraad ah waxay kasoo baxayaan khasaaraha ka dhashay camaliyad Istish-haadi ah oo barqadii maanta ka dhacday mid ka mid ah kaantaroollada laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyo dowaldda federaalka ee uu hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Jugta camaliyadda oo ahayd mid gilgishay qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir waxay si gaar ah u beegsatay xubno isugu jira saraakiil iyo shaqaale dowladeed oo ka howlgala xafiisyada madaxwaynaha iyo midka ra’iisul wasaaraha dowaldda federaalka ah.
War kasoo baxay xarakada Mujaahidiinta Al-shabaab waxaa lagu sheegay in camaliyadda oo ahayd mid si wayn loo agaasimay ay u dhacday sidii loo qorsheeyay ayna beegsatay mid ka mid ah cantaroolladda aadka loo ilaaliyo ee laga hubiyo gaadiidka gala xarunta ugu wayn ee ay ku dhuumaalaystaan madaxda dowaldda.
Idaacadda Al-andalus ee ku hadasha afka xarakada shabaabul Mujaahidiin waxay baahisay in weerarkaasi Istish-haadiga ah ay ku dhinteen ugu yaraan 16 xubnood oo ka tirsanaa dowladda Ridada una badnaa shaqaalaha ka howlgala xafiisyada Farmaajo iyo Rooble.
Sida caadiga ah subax walbaa Kantaroolkan muhiimka ah ee laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada kuna yaal dhanka Ceel-gaabta waxaa shaqaalaha dowaldda Ridada looga sameeyaa baaritaan hubin ah camaliyaduna waxay dhacday xilli ay barta kaantarool isi soo tubeen gaadiidka shaqaalaha dowaldda isla markaana uu socday baaritaankooda balse geesiga Istish-haadiga ah oo kaxeynayay gaari miinaysan ayaa uga soo baxay meel aysan filanayn halkaas na ku gaarsiiyay khasaare lixaad leh.
Ilo wareedyo muhiim ah waxay xaqiijiyeen marka laga soo tago dhimashada 16-ka ah in camaliyadda ay ku dhaawacmeen 20 kale oo isugu jira saraakiil iyo xubno ka howlgala xafiisyada madaxda dowaldda Ridada.
Camaliyaddan Istish-haadiga ah ee ka dhacday magaalada Muqdisho waxay kusoo beegantay xilli xassaasi ah oo guud ahaan waddanka gaar ahaan magaalada Muqdisho laga dareemayo doorashooyinka dowaldda federaalka madaxda dowladduna ay sheegeen in la adkeeyay ammaanka caasimadda balse camaliyaddan ayaa waxba kama jiraan ka dhigtay sheegashooyinka madaxda dowladda federaalka iyadoo camaliyaddan ay ka dhacday meel aan sidaas uga fogayn xafiisyada Farmaajo iyo Rooble.